Khasaaraha Dagaal shaly Laba beelood ku dhexmaray Gobolka Soo loo kordhay iyo baaqyo nabadeed oo loo diray – Madal Furan
Hoy > Warka > Khasaaraha Dagaal shaly Laba beelood ku dhexmaray Gobolka Soo loo kordhay iyo baaqyo nabadeed oo loo diray
Khasaaraha Dagaal shaly Laba beelood ku dhexmaray Gobolka Soo loo kordhay iyo baaqyo nabadeed oo loo diray
Editor September 7, 2018 0
Laascaanood (Madal Furan) – Wararka ka imaanaya magaaladda Laasscaanood ayaa sheegaya in dagaal shalay Laba Beelood oo walaalo ah ku dhex maray deegaanka gobolka Sool ay ka dhalatay khasaare nafadeed oo isugu jirta 16 qod oo dhintay iyo 60 kale dhaawac ah.
Guddi ka kooban Culimo iyo Odoyaal oo isu xilqaamay nabadaynta ayaa saaka shir Jaraa’id ku qabtay magaalada Laascaanood , Waxaa ay gudigani baaq canaan iyo caqli celin ah u direen labadan beelood ee shaqaaqada soo noq noqotay ku dhex maray magaalooyinka Dhumay iyo Dabataag .
Gudigan ayaa ugu baaqay labadan beelood in ay Ilaahey iyo Ummadaba ka xidhoodaan oo aanay beelahani u tali Wiil Qori wata oo intuu dad laayo hadana iyaga isku qariya iyana ay difaacaan oo halkaasi dagaal kale ka qarxo kuna nawaayaan dad badan .
Gudigan ayaa sheegay in ay ku dhaawacmeen dagaalkii shaaly 62 Qof , 16 ay ku dhinteen dhibaatadaa dhacday aanay sii socon , hubka iyo gurmadka labadan beelood ay wadaan iminkana la joojiyo oo Alle loo soo noqdo .
Waxaa ay sidoo kale Siyaasiyiintii shalay ka hadlay Hargeisa iyo Garoowe ugu baaqeen in ay joojiyaan Hadalla ay ku dhex qarinayaan Danahooda Siyaasadeed oo ay u dirayaan labadan beelood , isla markana sidii dabkaa loo damin lahaa ka shaqeeyaan hadalka aan ficilkawadana ee again Nabada ka shaqaynayaan iska daayaan.
Ugu danbayntii , Gudigan ayaa iminka ka anbabaxay magaalada Laascaanood , iyagoo ku jeeda deegaanadii ay dhibaatadu ka dhacey , Waxaa la laayey Haween Waayeel iwm Waxaana iminka labadan beelood ay isu horfadhiyaan goobihii shaya dagaalku uu ka dhacey iyagoo soo dhoobay awoodoodii Hub Ciidan iwm
Ugu danbayntii , Gudigan Nabadaynta ee loo xil saaray xalinta utunta u dhexeysa Labada beelood ee walaalha ah ayaa sii wadi doona dhexdhexaadinta ay wadaan.
Somaliland iyo DP World oo qoorta isla galay
Ballan aan fogeyn oo Garoowe ay isugu soo noqon doonaan Madaxweyne Farmaajo iyo Maamul goboleedyada
DAAWO:- Deegaanka Saax Dheere oo uu ka socdo shir lagu soo afjarayo colaadii beelaha Cumar Maxamuud iyo Bah-Ararsame